Tatoazy tratra, fanangonana ary fanalahidy | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy eo amin'ny tratra, ny lakile ary tolo-kevitra sasany
Antonio Fdez | | Tattoos on
ny tatoazy tratra Safidy mety indrindra izy ireo raha mitady hanao tatoazy amin'ny faritra malina amin'ny vatana. Ary io, ny tombokavatsa natao tamin'ity faritra misy ny vatantsika ity, dia tsy ho hita raha sendra mankany amoron-dranomasina, any amin'ny dobo filomanosana na rehefa ao amin'ny fiainam-pianakaviantsika manokana isika. Amin'ny andavan'andro dia karazana tatoazy mety indrindra izy ireo raha te hisoroka ny karazana olana any am-piasana.
Na lehilahy ianao na vehivavy, ny tratra dia faritra tena mahaliana ny vatana manao tatoazy. Ary, araka ny ho hitantsika mandritra ity lahatsoratra ity izay manome anao ny lakile ary manangona karazana tatoazy isan-karazany eo amin'ny tratra, dia malalaka be ireo azo atao. Raha mieritreritra ny hanao tatoazy eo amin'ny faritry ny tratra ianao dia mamporisika anao hanohy hamaky ity lahatsoratra ity.
1 Maratra ve ny tatoazy tratra?
2 Volavola tatoazy tratra
3 Sarin'ny Tatoazy Chest
Maratra ve ny tatoazy tratra?
Ity dia fanontaniana somary miverimberina ao amin'ny tontolon'ny tatoazy. Ary ny valiny fohy dia ENY maneno. Ary, raha tsy maintsy manao ny lisitr'ireo faritra ao amin'ny vatana izay misy fanaintainana bebe kokoa isika rehefa mahazo tatoazy, ny tratra dia iray amin'ireo maharary indrindra. Angamba, faharoa fotsiny amin'ny taolan-tehezana, tanana sy hatoka. Na dia, ary raha ampiana an'ity lisitra ity izay faritako foana hoe "Faritra mahery" raha te hanao tatoazy dia mila ampiana loha, sofina na tarehy, ohatra.
Miharihary mahazo tatoazy ao amin'ny faritra tratra, maharary izany. Tsy maninona na lehilahy na vehivavy isika, na izany na tsy izany dia tsy maintsy ataontsika an-tsaina fa izany dia faritra iray iainantsika fanaintainana lehibe. Na eo aza izany dia maro ny lafin-javatra nipoitra, toy ny refin'ny tatoazy, ny mpanakanto tatoazy ary koa ny vatantsika, satria ny tatoazy natao teo amin'ny toerana iray dia tsy mankarary toy izany.
Volavola tatoazy tratra
Raha ny momba famolavolana tatoazy tratra, ny tena marina dia tsy manam-petra ny habetsaky ny fahafaha-manao. Iray amin'ireo faritra lehibe indrindra amin'ny vatantsika (miaraka amin'ny lamosina) ny manao tatoazy. Noho izany, ireo mpanakanto tatoazy dia manana "lamba" lehibe hisamborana ny hevitsika rehetra. Izaho manokana ary raha mila manao tatoazy eo amin'ny tratrako (izay ho ela na ho haingana dia hianjera), dia misafidy singa hafa hamoronana firafitra lehibe kokoa.
Midika izany, raha ny hevitro, heveriko fa ny tombokavatsa eo amin'ny tratrany amin'ny habe tokana (toy ny tigra na liona) dia tsy dia tsara toa antsika manao tatoazy kely kokoa hamoronana firafitra. Ohatra mazava ny tiako holazaina dia vorondolo miaraka amin'ny raozy vitsivitsy, diamondra ary karandoha. Na dia, ary araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny safidy dia saika tsy misy farany. Amin'ny manaraka tranombakoky ny tatoazy tratra afaka mahita tolo-kevitra vitsivitsy ianao.
Sarin'ny Tatoazy Chest
Ireto ambany ireto dia misy angon-tsarinao tatoazy ambanin'ny tratra sy ny faritra manodidina. Ao amin'ilay rohy izay navelanay fotsiny ianao dia hahita ohatra maro hafa, mifantoka indrindra amin'ny vehivavy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Tatoazy eo amin'ny tratra, ny lakile ary tolo-kevitra sasany
Soleyne dia hoy izy:
Salama, ny tattoo ny vadiko teo amin'ny tratrany, teo amin'ny ilany havia ... nolazainy izany satria tiany aho ... Marina ve izany? Mety ho lasa porofom-pitiavana ve ny tatoazy?
Valiny tamin'i Soleyne
Ny tatoazy malina, lamaody amin'ny ampahany hafa amin'ny taokanto tombokavatsa
Fanangonana tatoazy masoandro